Tiknoolajiyadda Suuqgeynta Ugu Weyn | Martech Zone
Arbacada, February 24, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Naqshad fidsan: maskaxda
Maya, ma haysto wax aan kaa iibiyo. Saas ma ahee, waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo run qoto dheer oo laga yaabo inaad iloowday: in aaladda ugu awooda badan ee suuq geynta ganacsigaaga si hufan ay tahay mid aad horey u laheyd. Waa mashiinka xisaabinta ugu casrisan adduunka - maskaxdaada.
Baaqa ah inaad runti isticmaasho noggin-kaaga waa midka aan maqalno markasta. Waa waxa waalidiinta iyo macallimiintu ku yiraahdaan carruurta, waxa maareeyayaasha jahwareersan ku dhahaan shaqaalaha iyo waxa macaamiisha xanaaqsan ay u sheegaan iibiyeyaashooda. Marka sidee digniintii hore ee FIKRADA nooga caawin kartaa tikniyoolajiyadda suuqgeynta? Si aan uga jawaabno su’aashaas, waa inaan dib ugu noqonaa aasaaska.
Waa maxay Suuqgeyn? Waa maxay Farsamada?
Inkastoo Martech Zone waxaa ka buuxa fikrado fantastik ah oo ku saabsan hagaajinta suuqgeyntaada internetka iyo alaabada cajiibka ah ee kordhinta beddelaadda, ma jirin dood aad u badan oo ku saabsan waxa ereyada "suuqgeyn" iyo "farsamo" ay dhab ahaan macneheedu waa. Qoritaanka qeexitaankaaga ayaa ah hab fiican oo aad si qota dheer uga fikirto. Waa tan waxa aan uga fikirayo ereyadan:
Suuq- - Bixinta macluumaadka la xiriira ku saabsan alaabtaada, adeegyadaada iyo sumaddaada dhagaystayaasha suurtogalka ah macaamiisha iyo u doodayaasha.
Technology - Codsiga sayniska iyo caqliga geedi socodka si loo wado hagaajinta nidaamka wax soo saarka.
Sida qeexitaan kasta, waxaa jira fikrad aad uga badan ereyadaas. Laakiin ogow weedhaha aan adeegsaday: Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay bixinta, halka teknolojiyaddu ku saabsan tahay codsiga. Taasi waxay ka dhigan tahay suuqgeyn waa wax ay tahay inaad u yeerto, jibbaar iyo caruusad ku aado meesha saxda ah, halkaas oo tikniyoolajiyaddu ay ku saabsan tahay in la isu googooyo.
Sida ku cad qeexitaankeyga, Xoogga saar ee suuqgeynta ayaa aad uga duwan diiradda tiknoolajiyada. Waa inaan u adeegsanaa suuqgeyn si aan ula xiriirno macaamiisha mustaqbalka iyo kuwa u dooda. Laakiin tiknoolajiyada waa inay dhab ahaantii keentaa horumar la qiyaasi karo iyadoo la adeegsanayo nidaam.
Markaan labadaas eray isku wadno, tikniyoolajiyadda suuqgeynta waa inay labaduba diirada saaraan dhagaystayaasha iyo nidaamsan. Fikirkaas, inbadan oo kamid ah dadaaladeena ganacsi waxay soo galeen diiradda fiiqan. Anagoo si fudud u ogaanay sida ugu wanaagsan ee howlaheena ula jaan qaadayaan qeexitaanadeena, waxaan kuheli karnaa dareen ah sababta dadaaladeena tikniyoolajiyadeed ee suuqgeynta ay u noqon karaan kuwa guuleysta ama guuldareysta.
Nidaamyo wanaagsan, dhagaystayaal qaldan
Miyaad iskaanaysaa kaar kasta oo ganacsi oo aad gasho keydka suuq geynta emailkaaga oo aad bilowdo inaad isla markiiba u dirto farriimo? Hadday sidaas tahay, taasi waxay ka dhigan tahay inaad heshay nidaam aad u fiican oo lagu farsameeyo kaararka ganacsiga. Laakiin waxaan ku sharxayaa in qiimahaaga furan uu hooseeyo oo aad leedahay macaamiil soo noqnoqda. Taasi waa sababta oo ah kaar ganacsi oo kasta oo aad hesho ayaa laga yaabaa ma matala dhagaystayaasha saxda ah ee sheygaaga. Waxaad isticmaaleysaa aalad aad u fiican laakiin dadka qaldan.
Dhageystayaasha saxda ah, ma laha nidaamyo
Miyaad ku sii socotaa wicitaano iib ah oo cajiib ah oo lala yeesho musharrixiin adag laakiin waxaad illoobeysaa inaad dabagal sameyso Waa inaad sameyneysaa suuqgeyn aad u fiican si aad u hesho dadkaas, ha noqoto shabakad, xayeysiin ama ilo kale. Laakiin haddii aadan ku dadaalin sameynta wicitaanka soo socda si aad u xirto heshiiska, ma lihid nidaam iib lagu kalsoonaan karo. Hogaamiyaasha aduunka ugu waawayn waa kuwo aan qiimo lahayn hadaadan dhab ahaan saxeexin heshiis.
Waqtiga Kediska Dadweynaha
Waa kuwan qaar ka mid ah guuldarrooyinka tikniyoolajiyadda suuqgeynta ee aan soo maray usbuucii la soo dhaafay. Way fududahay in la arko sababta ay dhibaatada u leeyihiin. Eeg haddii aad ogaan karto waxa ku saabsan fashilka dhibaatada keenay. (Xulo qoraalka u dhexeeya [sidan oo kale] jawaabta.)
Waxaad u dhiibtay xaashi munaasibadaada hadalka ee soo socota, laakiin kuma darin goobta [cillad farsamo oo hooseysa: waxaad u baahan tahay liis hubineed oo ku saabsan samaynta xaashida waraaqaha]
Waxaad i siisay kaarka ganacsiga shirkadaada xayeysiinta ee wadanka oo dhan, laakiin cinwaanka iimaylkaaga waxaa ku jira Hotmail [guuldarrada suuqgeynta: waxaad u maleyneysaa in dhagaystayaashaadu aysan aqoon / daryeel u lahayn magac domain run ah]
Hal codkaaga ayaa ku weydiinaya laba su'aalood: Ma maqlay adeeggaaga? Mise, anigu waxaan ahay xubin hore oo su'aalo ka qabtaa? [guuldarrada suuqgeynta: waxaad isku darsatay laba dhagaystayaal gebi ahaanba ka duwan hal suuq]
Munaasabad isku xirka, waxaad ii balanqaadeysaa inaad macluumaad ii soo diri doonto isla maalintaas dambe laakiin ha qorin. Weligay kaa maqli maayo. cillad farsamada: ma lihid qaab dukumiinti ahaan]
Albert Einstein waxaa lagu soo waramayaa inuu mar yiri "Dhibaatooyinka muhiimka ah ee aan wajahayno laguma xallin karo isla fikirka iyaga abuuray." Haddii aad rabto inaad xalliso dhibaatooyinkaaga tiknoolajiyada suuqgeynta, dib ugu laabo aasaaska fikirka si cad. Qiimee qeexitaankaaga. Jaantus waxa aad khaldan tahay si aad u bilaabi karto inaad wax saxdo.
Tags: farsamada ugu fiicanmaskaxdaTechnology
Feb 24, 2010 markay ahayd 3:56 PM
Mar labaad waxaan heshiis joogta ah la galay Robby.
Markaan aqriyo qoraalkan, badanaa waxaan ka fakaraa sida aan ugu adeegsan karo suuqa, iyo dhanka kale
Shaqo fiican ayaa nagu soo celinaysa aasaaska!